मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : बैशाख ३१ गतेको चुनावमा आउने कि नआउने ? - Ratopati
मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : बैशाख ३१ गतेको चुनावमा आउने कि नआउने ?
अर्को बैठक पाँच बजे बस्ने
काठमाडौ, बैशाख ८ – सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच शुक्रबारको छलफल सकारात्मक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहिबेर अघि सकिएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरुसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव कसरी टुङंगो लगाउन सकिन्छ र संशोधन प्रक्रियामा जाँदा मोर्चाको पोजिसन के हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागि माओवादी केन्द्रका नेता बर्षमान पुनका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैशाख ३१ गते चुनावका बारेमा मोर्चाको अबस्था के हो ? भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै प्रचण्डले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइए मोर्चा निर्वाचनमा आउने या नआउने भनेर स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए ।
यदि मोर्चा चुनावमा आउन तयार रहे त्यसका लागि सरकारले दुवै काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव समेत गरिएको थियो ।
जवाफमा मोर्चाका नेताहरुले केही घण्टा समय माग गरेका थिए । मोर्चा निर्वाचनमा आउन तयार भए आजै दिउँसो तीन बजे सत्तारुढ दलको बैठक बस्ने र सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई बताएका थिए ।
सहमति खोज्न मोर्चा र सत्तारुढ दलको बैठक आजै साँझ पाँच बजे फेरि बस्ने पनि सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले छलफललाई अगाडि बढाउँदै चुनावको तयारीमा लाग्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरे पनि मोर्चाका नेताहरुले त्यसलाई भने अस्वीकार गरेका थिए । आफूहरुले चुनाव वहिस्कार गरेको बताउँदै मुद्दा टुंगो नलगेसम्म चुनावमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
यता नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले प्रधानमन्त्रीले आजनै मोर्चाको मागबारेको अन्यौलता टुंग्याउने कुरा राखेको रातोपाटीलाई जनाकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले छलफललाई अगाडि बढाउँदै आजै नै कुरा टुंग्याउने गरी छलफल गरौँ भनेर भन्नुभएको छ,’ झाले भने, ‘हामीले पनि आजै टुंग्यायौँ । सँधै छलफल मात्र भनेर नबसौँ । कुरा नटुंगिए आफ्नै बाटो लागौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि मोर्चासँग परिमार्जनको विषय माग गरेका थिए । तर, मोर्चाले आफूहरुले परिमार्जनको विषय दिनुभन्दा पहिले शीर्ष दलहरुले मोर्चाको मागबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राप्रपासँग छलफल गरेर पुनः बैठक बस्ने बताएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुन ‘अनन्त’, मोर्चाका नेताहरु महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अनिलकुमार झा, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादव, हृदयेश त्रिपाठी लगायत सहभागी थिए ।